အေးမြ Jewel WMS နေတဲ့အွန်လိုင်း slot ကဂိမ်းနှင့်ပေါက်ကွဲပြီးသုံးစွဲဖို့သူတို့၏တန်းစီဇယားအနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးဂိမ်းအင်ဂျင်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ slot ကအခြေခံအားဖြင့်ရှိပါတယ်6ရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါင်းတို့နှင့်နည်းလမ်းများပေးဆောင်. သငျသညျ£ 200 လှည့်ဖျားသလောက်မှလှည့်ဖျားနှုန်း 50p ကဲ့သို့နိမ့်ကနေဒီဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်. ဒီဂိမ်းလည်းထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့လှည့်ခြင်းများအဖြစ်ဆုကြေးငွေကျည် features, အဆင့်ဆင့်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်တောရိုင်း.
အေးမြ Jewel ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ရတနာအရက်ကြောင့်မှားယွင်း adorning နဲ့ရေခဲ kinda ဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ်. အဆိုပါဂရပ်ဖစ်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ရေးသားဖို့တကယ်ကောင်းသောမဟုတ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ boring မပါစေရန်လုံလောက်သောသူတို့ပဲ ပတ်သက်. အလုပ်. အဆိုပါဂီတလည်းအတူတူပင်လိုင်းများပေါ်ရုံလုံလောက်ပေ. သငျသညျ kinda ပိုပြီးချို့တဲ့ကျန်ကြွင်းမယ့်စိတ်ပျက်စရာသော်လည်း.
အားလုံးပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်ရရှိနိုင်ပါသောဂိမ်း Jewel တကယ်ပလက်ဖောင်း၏အသီးအသီးအဘို့အကောင်းစွာ Optimized ဖြစ်ပါတယ် Cool. မိုဘိုင်းဖုန်းများအပေါ်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တုန့်ပြန်သည်ကြီးမြတ်နှင့်လည်းဂိမ်းအများကြီးနှေးသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲထွက်ကစား. ဒီရှုထောင့်အပေါ် WMS ကနေတကယ်ပဲကောင်းတဲ့အလုပ်.
အဆိုပါပေါက်ကွဲရိုင်းသင်္ကေတများ blasting နှင့်နေရာတိုင်းပေါက်ကွဲအားဖြင့်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါ်ဖျက်ဆီးပါသညျအဖြစ်အင်ဂျင်ကိုအခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုအနိုင်ရမှနည်းလမ်းများစွာပေးသည်ပေးဆောင်. အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်ဒီဂိမ်းဟာကစားရရန်ရှိသည်အနိုင်ရမှဂန္ slot ကဂိမ်း၏တူ၏4ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက် aligned သင်္ကေတများနှင့်ကိုက်ညီ၏သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို. ထိုအခါထိုမှော်သင်္ကေတအသစ်ကိုသင်္ကေတများနှင့်နောက်တဖန်အနိုင်ရမှအခွင့်အလမ်းများကိုဖျက်ဆီးပစ်နေကြတယ်.
အေးမြ Jewel အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်5အနိုင်ရမှနည်းလမ်းများစွာနှင့်အတူရက်ကြောင့်မှားယွင်း slot ကဂိမ်း. သငျသညျလှည့်ဖျားနှုန်း 50p ထံမှအဖြစ်တာလှည့်ဖျား£ 200 အဖြစ်ဒီဂိမ်းကိုကစားနိုင်. အဆိုပါ slot ကမကြာခဏသေးငယ်တဲ့အနိုင်ပေးဖြစ်ပေါ်နေတွေအများကြီးနှင့်အတူအလတ်စားကှဲလှဲမယ့်အနိမ့်ရှိပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းကြီးတွေကိုအနိုင်ပေးရပြုပါသော်လည်းသင်သည်အနည်းငယ်သည်းခံခြင်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်.
ဒီဂိမ်းရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အစာရှောင်အရှိန်အဟုန်သဘာဝ NetEnt ရဲ့ Starburst သင်သတိပေးစေခြင်းငှါ,. တကယ်တော့နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဂိမ်း၏အထူးသဖြင့်ဂိမ်းအင်ဂျင်အလားတူမျိုးနှစ်ဦးစလုံးကတည်းကဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံအလားတူအမျိုးအစားသည်.
Also this game hasafree spins bonus which when triggered will you give you up to 8 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. This is actually triggered when4or more of the bonus symbols are destroyed.